အိန္ဒိယတွင် coated မီးခိုးရောင်ကျော duplex ဘုတ်အဖွဲ့ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်း
coated မီးခိုးရောင် back duplex ဘုတ်အဖွဲ့
အဖြူနောက်သို့ duplex ဘုတ်အဖွဲ့
coated မီးခိုးရောင် duplex ဘုတ်ထုတ်လုပ်သူ
Wantura HWC / Spenta LWC
အရွယ်အစား / အရွယ်အစား
180 မှ 400
တစ်နေ့လျှင် 300 တန်
Pallet / Sink Packing / သင်၏လိုအပ်ချက်အတိုင်း
ထုတ်လုပ်မှုနေစဉ်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအခြေအနေများကိုစိတ်ထဲထားနေသည့်အရည်အသွေးမြင့်သော duplex board.
အရည်အသွေး coated duplex ဘုတ်အဖွဲ့
coated မီးခိုးရောင်ကျော duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူ
ယနေ့ခေတ်တွင်စိတ်ခံစားမှုကိုမောင်းနှင်ခဲ့သည်'S ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းသည်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်၎င်း၏လမ်းခင်းပေးခဲ့သည် Spento Papers လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့်အချိန်အနည်းငယ်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏အကောင်းဆုံး0န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များကိုဖောက်သည်များအားပေးပို့သည်. အသုံးပြုသူများ၏စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်ပိုမိုပါးနပ်သောထုပ်ပိုးမှုအဖြေရှာရန်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်ရှာဖွေခြင်းသည်ထုပ်ပိုးထားသောဘုတ်အဖွဲ့စာတမ်းများစက်မှုဇုန်တွင်မောင်းနှင်အားဖြစ်ရန်ခန့်မှန်းထားသည်. spento မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရှိသောမီးခိုးရောင်ကျောပိုးအိတ်စက္ကူကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတစ်ဆင့်မိမိကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးသည်. အထူးသဖြင့်ပို့ကုန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်နေရာများသည်ထုတ်လုပ်မှု၏ 80 ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များသို့ပို့ဆောင်ရန်မျှော်လင့်သည်. နိုင်ငံအတော်များများတွင်ခြေကုပ်ယူပြီးဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်မှန်းချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လည်ပတ်မှုပုံစံဖြင့် Duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာရန်ဖြစ်သည်. Spento coated မီးခိုးရောင် duplex ပျဉ်ပြားထုတ်လုပ်သည်. Spento အိန္ဒိယနှင့်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင်မီးခိုးရောင်ပြန်လာသည့်မီးခိုးရောင်ဘုတ်အဖွဲ့စာရွက်စာတမ်းများကိုထင်ရှားသောထုတ်လုပ်သူနှင့်တင်ပို့သူဖြစ်သည်. နှင့်လုံးဝစက်မှုလယ်ယာစက်ရုံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက္ကူဘုတ်အဖွဲ့များသည်အမြင့်ဆုံးသောအရည်အသွေးများဖြစ်သည်ဟုအာမခံသည်။ ထုတ်လုပ်မှုစံနှုန်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကြီးကြပ်မှုအဆင့်မျိုးစုံသည်.
Duplex board စာတမ်းတွင်အလွှာနှစ်ခုပါ0င်သည်. ၎င်းတို့ကိုစားသုံးသူထုပ်ပိုးကဏ္ sectors များနှင့်စက်မှုထုပ်ပိုးများအတွက်အသုံးပြုကြသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ coated မီးခိုးရောင်နောက်ကျော Duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူ
coated မီးခိုးရောင်ကျော duplex board စက္ကူကိုအဖြူရောင်အပြင်ပန်းနှင့်မီးခိုးရောင်အတွင်းပိုင်းအလွှာဖြင့်ဖန်တီးထားသည်. တောက်ပသောပျော့ဖတ်ခြယ်မှုများနှင့်အတူ coated, ၎င်းသည်တောက်ပသောအသွင်အပြင်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။. အပြင်ဘက်တွင်တစ်ဖက်တွင်ပြက္ခဒိန်များမှာပြက္ခဒိန်များမှာအဖြူနှင့်ချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အော့ဖ်စက်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မီးခိုးရောင်စာသားအတွင်း၌တပ်ဆင်ထားသည်.
Grey Back Duplex ဘုတ်အဖွဲ့၏အင်္ဂါရပ်များ
အလင်းရောင် - ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုဖုံးအုပ်ထားသည့်မီးခိုးရောင်နောက်ကျော Duplex ဘုတ်အဖွဲ့စာတမ်းများက၎င်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အလွန်အဆင်ပြေစေသည်.
တင်းကျပ်မှု - coated မီးခိုးရောင်နောက်ကျော duplex ဘုတ်၏ Multileveleveled ဖွဲ့စည်းပုံသည်ထုပ်ပိုးခြင်းတွင်အသုံးပြုမှုအလွန်တောင့်တင်းသည်.
တောင်မှ Slick Slick - အညီအမျှ coated အပြင်ဘက်တွင်ဘုတ်အဖွဲ့စာတမ်းများသည်အကောင်းဆုံးကြည့်ရှုခြင်းကိုကျော်လွှားခြင်းကိုပြသသည်.
ရေခုခံ & ဖုန်မှုန့်ခုခံ တောက်ပသောအပြင်အဆင်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအပြင်ဖုံးအုပ်ထားခြင်းသည်ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်များကိုစက္ကူမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တင်ထားရန်တားဆီးပေးသည်.
ပုံနှိပ်သိပ်သည်းမှု - cooned မီးခိုးရောင်နောက်ကျော Duplex ဘုတ်အဖွဲ့၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်၎င်းကို inkjet သို့မဟုတ် Laser Printing မှခွဲထုတ်သည့် offset ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ဤအချက်သည်စက်မှုဇုန်ထုပ်ပိုးခြင်းအရည်အသွေးကိုလူကြိုက်များသောဒီဇိုင်းများဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်.
ကြံ့ခိုင်သဘောသဘာဝ - မီးခိုးရောင်နောက်ခံ duplex ဘုတ်အဖွဲ့စာတမ်းများ၏ဖွဲ့စည်းမှုသည်မည်သည့်အသုံးပြုမှုမျိုးကိုမဆိုအလွန်တာရှည်ခံစေသည်.
ဆံပင်ကောက်ကောက် - duplex board စာတမ်းများသည်မည်သည့်ပုံသဏ္ for ာန်ကိုမဆိုပုံသဏ္ for ာန်သို့မဟုတ်မည်သည့်ပုံသဏ္ဌာန်သို့မဆိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။.
မီးခိုးရောင်ပြန် duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Multilevel ဖွဲ့စည်းမှု - COUCKED မီးခိုးရောင်ကျော Duplex ဘုတ်အဖွဲ့ကိုတင်သွင်းထားသောပျော့ဖတ်နှင့်ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောပျော့ဖတ်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သာလွန်သောထုတ်ကုန်များပြုလုပ်သောရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအထိရောစပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်.
အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ - Duplex board စာတမ်းကိုအပျိုစင်စက္ကူစွန့်ပစ်ပစ္စည်းကဲ့သို့သောပရီမီယံကုန်ကြမ်းများ,.
ECO-Friendly ထုတ်လုပ်မှု - ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အနည်းဆုံးဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများအပေါ်တွန်းအားသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်အကောင်းဆုံးဂေဟမထက်.
လုံးဝသန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန် - ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏0က်ဘ0င်နေရာ၌တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေးအတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သေချာစေရန်အတွက်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးထုပ်ပိုးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ coubleute back duplex board paper ကိုအသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏မီးခိုးရောင်နောက်ခံ duplex ဘုတ်အဖွဲ့စက္ကူကိုအလုပ်လိုအပ်ချက်အရ,. GiNonmy0န်ဆောင်မှုများ, အဝတ်စုတ်ခြင်း, အငွေ့ပြားများ, အစားအစာထုပ်ပိုးခြင်း, အစားအစာထုပ်ပိုးခြင်း, အစားအစာများ, အစားအစာထုပ်ပိုးခြင်း,.